Austin Rolling Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Austin Kutenderera
Austin Rolling ndiye mubatanidzwa uye CEO we Outfield. wechitatu-chizvarwa muzvinabhizimusi. Akatanga kambani yake yekutanga, webhusaiti yemafashoni, aine makore makumi maviri. Anobata BA muKutaurirana kubva kuEastern Michigan University uye MBA kubva kuTexas A&M University. Akapedza yakawanda yebasa rake achishanda muzvinhu zvevatengi uye IT nzvimbo mukutengesa kwemunda uye kushambadzira, manejimendi uye kusimudzira bhizinesi mabasa.